Andron’ny Mahatsiravina Ao Gaza, Mandaroka Baomba Ireo Toeram-ponenana Manodidina i Israely, Mihoatra Ny 450 No Maty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2014 6:09 GMT
Nanoritsoritra ny loza mahatsiravina hitany ireo vavolombelona nahita maso tao Gaza arakaraky ny fitombon'ny isan'ny maty taorian'ny iray andro sy iray alina nandarohana baomba ny fari-ponenana ao Al-Shejaia, any amin'ny manodidina ity tanàna atao fahirano ity. Androany no andro faha-13 hatramin'ny nanombohan'ny “Hetsika Fiarovana Maranitra,” nataon'i Israely ho valin'ny fahafatesan'ireo zatovo Israeliana telo.
Niaraka daholo ireo mpikatroka mafàna fo sy loharanom-baovao Palestiniana nilaza fa 437 hatreto no Palestiniana namoy ny ainy, ka anisan'ireny ireo zaza amam-behivavy marobe, ary an'arivony no naratra. Milaza ihany koa ireo loharanom-baovao fa eo amin'ny 13 eo ny miaramila Israeliana maty.
Mihoatra noho izay efa hitan'ny Palestiniana hatrizay nanombohan'ity ady ity ny zava-dozan'ny androany, indrindra fa ny fanafihana manokana nanjo an'i Al-Shejaia mpifanolo-bodirindrina amin'i Gaza. Mibilaogy ilay sedra ao anatin'ity sary ity [TANDREMO: sary mahery setra] i “Occupied Palestine” ary ao amin'ny “Electronic Intifada”, mitatitra i Ali Abunimah hoe:
An'arivony ireo Palestiniana nandositra ny tanàna manodidina satria niha-henjana ny ady, na dia tsy hita hoe aiza aza no toerana haleha. Gaza, ahitàna Palestiniana 1,8 tapitrisa, dia nofaritana ho ny “fonja an-kalamanjàna midadasika indrindra erantany.” i Israely no ao amin'ny sisintany ilany, ary Ejipta no ao amin'ny ilany.
Izao no fanamarinan-tena ataon'ny tafika Israeliana mba handarohany baomba ny trano, hopitaly, trano fivavahana ary sekoly. #Gaza pic.twitter.com/jOP7h2KVND